Hiran State - News: HS:-Madaxweynaha Jamhuuriyada oo galkiisa seefta kala baxay: "Ciddii lagu helo Kufsi waa dil toogasho,
HS:-Madaxweynaha Jamhuuriyada oo galkiisa seefta kala baxay: "Ciddii lagu helo Kufsi waa dil toogasho,
HS:- Madaxweynaha jamhuuriyada federalka Soomaaliya Prof Hasan Sheikh Mahamud oo la hadlayey shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciddii lagu helo kufsi lagu fulinayo dil toogasho fariintaan oo si toos ah ugu socotay kooxo qas wadayaal ah oo shacabka ku haya aqlaaq daro, isagoo sidoo kalena sheegay inaysan jiri karin isbaarooyin lacago lagu qaadayo kuwaasi oo daadsan meelo badan oo dalka ka mid ah oo ay caasimada Soomaaliya ku jirto.
Madaxweynaha jamhuuriayda ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu xarunta madaxtooyada kula qaatay xalay guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo guddoomiyeyaasha gobolada dalka qaarkood.
Fariinta madaxweynaha amaba qudbadii uu shirkaas ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ahaa"Ciddii lagu helo kufsi xukunkiisu waa dil toogasho, arrintaanna waxaa la waafajin doonaa shuruucda dalka," ayuu yiri Xasan Sheekh oo intaas ku daray:"In oday iyo haween uu qabay oo isla jooga inta guriga loo galo in haweeneydii lagu kufsado odaygeedii hortiisa ma ahan mid loo dulqaadan karo."
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay ka hortagto cid walba oo dhibaateynaysa shacabka, isagoo xusay in askari iyo qof kale aan laga ogolaan doonin inay shacabka dhibaatooyin u geystaan bulshadana iska dhax joogaan iyagoo danbiyaal ah.
Link ayuu si kulul u yiri madaxweynaha jamhuuriyada, wuxuuna hadalkiisa kusii daray:
Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu carabka si rasmi ah ugu dhuftay in iskaba daa dalka intiise kalee Muqdisho kaliya ay yaalaan in ka badan 50 isbaaro oo dadka shacabka ah looga qaado lacago baad ah, isagoo xusay in lasoo ogaaday lacagta lagu qaado isbaaro walba iyo halka ay ku dhacdo, wuxuuna xusay inaan la ogolaan doonin hadda kaddib in isbaaro la dhigto.
"Wasaaradda maaliyadda iyo lacagta iyo maamulka gobolka Banaadir ma jirto lacago ay qaadi karaan caawa wixii ka dambeeya, waxaana laga doonayaa haddii ay lacag qaadanayaan inay la yimaadaan habkii lagu qaadi lahaa iyo halkii ay ku dhici lahayd," ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in lacagaha isbaarooyinka yaalla Muqdisho laga qaado ay ku dhacaan jeebab kale oo aysan ku dhicin qasnadda dowladda taasna ay tahay mid aan la ogolaan karin in shaqsiyaad ay dhaqaalo ka qaataan shacabka.
Dhanka kale, madaxweynuhu wuxuu ka hadlay ammaanka, isagoo sheegay in wax lala yaabo ay tahay in qof lagu dilo magaalada cid dabagal dilkaas ku sameysana aysan jirin, isagoo xusay in ciidamada booliiska looga baahan yahay inay dambi kasta oo dhaca ay daba-gal ku sameeyaan.
"Waxyaabaha la yaabka leh ee Muqdisho ka dhaca waxaa ka mid ah in la yiraahdo kooxo bastoolado ku hubesan ayaa qof dilay, 10-daqiiqo kaddibna ay xaaladdu isku bedesho sida iyadoo aysan waxba dhicin. Murugaduna waxay ku haraysaa qoyskii qofka laga dilay, taasna waa damiir xumo dad iyo dalna sidan laguma bad baadin karo ayaa hadaladii madaxweynaha ka mid ahaa,"
Intaas kaddib madaxweynuhu wuxuu amar ku siiyay ha'yadaha nabadsugidda dalka inay ka hortagaan dambiyada, haddii uu dambigu dhaca wuxuu sheegay in ciidanka booliiska ay daba-gal ku sameeyaan ayna xiraan goobta uu dambigu ka dhacay si loo ogaado cida ka danbeysay dilkaas.
Marka laga soo tago qudbada madaxweynaha magaalada Mogdishu waxaa jira degmooyin iyo xaafado u muuqaal eg ineysan ka talin dowalda markaad eegto isbaarooyinka lacagaha baada ah lagu qaado sida mida taalo siinka dheer iyo kooxo maleeshiyo beeleed ah oo ka amar qaata wali qaar ka mid ah hogaamiya kooxeedyadii Mogdishu oo saldhigyo ku leh xaafada Hodan oo halkaas ka fuliya amaba ka maamula isbaarooyinka yaala magaalada Mogdishu.
Arinta aysan dad badan la socon ayaa ah in mid ka mid ah maamulaasha idaacadaha Mogdishu ka howl galo ay iyaguna dhaqaalo ka soo galaan isbaarooyinkaas oo ay xirii wada shaqeyn ah ka dhaxeyso kuwa isbaarada dhigta kuwaasi oo dhawaan dagaal dhinaca mediyaha ah ku qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir Tarzan xili uu sheegay in lacago baad ah aan laga qaadi karin shacabka.
Sikastaba xaalada Soomaaliya maahan sidii hore waxeyna u muuqataa in ay dowladan cusub shaqsiyaad badan oo ku magacaaban xilal muhiim ah la xisaabtami doonto si loo yareyo amaba loog ahortago musuq maasuqa iyo fowdada la haray bulshada Soomaaliyeed, walow ay dhici karto in masuuliyiin badan dhawaan xilkooda ku waayaan maadaama uu ku socdo baaritaan xoogan shaqsiyaad badan.
Isku soo duuboo madaxweynaha ayaa maanta safar ku tagay dalka Jabouti halkaas oo siweyn loogu soo dhaweeyey xili uu hogaaminayey wafti kooban oo uu ka mid ahaa wasiirka gaashaandhiga jamhuuriyada federalka Soomaaliya Mr Fiqi
· admin on November 26 2012 15:58:37 · 0 Comments · 2309 Reads ·
14,613,574 unique visits